Bringing Peace | Rovalalaina ANDRIAMASITEFY's Fundraiser
Rovalalaina ANDRIAMASITEFY's Fundraiser:
"Bringing Peace" dia midika amin'ny teny Malagasy hoe: "Mitondra Fiadanana". Araka izany anarana izany, ity tetikasa ity dia natao mba hanomezana fanampiana ho an'ny olona manan'olana. Ny tena voakasika dia ireo "marary saina" sy "marary vatana" tezaina sy tsaboana ao amin'ny TOBY FIADANANA Arivonimamo izay karakarain'ny "Association Projet Shalom" ary ara-dalàna sy ara-panjakana manaraka ny decret:
Ny tanjon'ity tetikasa ity dia mba ahafahana manangana trano manara-penitra, manome sakafo sy fitafiana ho an'ireo voalaza tetsy ambony ireo, satria dia fianakaviana tena sahirana tokoa ny ankamaroany araka ny hita etsy amin'ny sary sy "film" etsy.
Azon'ny rehetra atao ny mandray anjara ka raha misy tolotra ataonao dia azonao alefa amin'ity compte bancaire tokana ity: izay natokana ho an'ity tetikasa ity ihany.
Mba hisian'ny mangarahara, ny tolotra ataonao dia hisoratra etsy ankavanana daholo ary amin'ny Ariary Malagasy no anoratana izany fa tsy dollar Américain. Ary rehefa feno ny vola ilaina dia atolotra ireo tompon'andraikitry ny TOBY FIADANANA amin'ny fomba ofisialy ary haseho mivantana amin'ny Haino aman-jery eto an-toerana ny fanolorana izany (Hisy dokam-barotra tsy ho ela mba hanamarinana ny fisian'ny tetikasa)